Ifulethi ALMA - I-Airbnb
I-ALMA ikunika yonke into oyifunayo ukuze uhlale ukhululekile kwaye umnandi. Le ndlu yintsha kraca, ineefestile ezininzi ezenza indawo ibeshushu kakhulu kwaye inelanga. Ibekwe kumhlaba wendlu kunye nomnyango owahlukileyo. Indawo iqaqambile kwaye iphangalele, inegumbi elinye lokulala, kunye negumbi lokuhlala elinomoya elidityaniswe nekhitshi kunye negumbi lokuhlambela. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo nge-oveni kunye nezinto zasekhitshini. Ngeentsuku ezinelanga, unokuhlala kwi-terrace kwaye ujabulele umbono oluhlaza kwindawo engqongileyo.
Ifulethi i-ALMA yathiywa ngegama lomfazi odumileyo waseSlovenia u-Alma Karlin owayengumhambi wehlabathi kunye nombhali. Watyhutyha ihlabathi yedwa ekuqaleni kwenkulungwane yama-20. Wayehlala eCelje, ethetha iilwimi ezisibhozo kwaye ejikeleza ihlabathi kwiminyaka esibhozo. Ngenxa yezinto ezininzi ezinomdla neziyingozi, wabhala iincwadi ezininzi malunga nohambo lwakhe kunye nobomi bakhe.
Ikwindawo egqibeleleyo, imizuzu eyi-7 kuphela ukusuka kuhola wendlela kunye nohambo olufutshane lwemizuzu eli-10 ukusuka kumbindi wedolophu endala, ekufutshane neyona ndawo iluhlaza yesixeko kunye nomlambo iSavinja. Ifulethi lonke, i-terrace kunye neendawo zokupaka zabucala ziyafumaneka kuwe.
Ekupheleni kosuku olupheleleyo lokuphonononga, unokuziphatha ngenye yeendlela ezininzi zonyango zokuphulula kwi-salon yethu ye-massage ebekwe kwindlu enye. Ukongeza, ezinye iimveliso zasekhaya kunye ne-ECO ziyafumaneka kwivenkile yethu encinci kunye nentle.
Ungajonga ngokulula amahlathi kunye neepaki zethu ezikufutshane. Eyona nto inomtsalane esixekweni ziimyuziyam, iigalari, iicawe, iinqaba, iindawo zokutyela, kunye neendawo ezininzi ezifihlakeleyo apho uAlfred Nobel odumileyo wayehlala khona phantse iminyaka emi-2. Kwiindawo ezingqongileyo, unokufumana iindlela zokuhamba kunye neebhayisikile ezintle, impilo kunye neendawo zokuchithela i-ski ngexesha lasebusika, amachibi kunye nezinto ezininzi zendalo kunye nezenkcubeko.
Siya kwenza konke okusemandleni ethu ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kwaye kukhululekile. Sisoloko sikhona ukukucebisa nokukunika ulwazi olongezelelweyo.